Umvelisi oGqibeleleyo weCopper kunye noMzi mveliso | Beihai
Ubhedu lweCopper lusetyenziswe ngokubanzi njengamalungiselelo ebhetri engaphathanga nto, i-electrode substrate yebhetri ye-lithium ion okanye ipetroli, isiphatho seseli-catalyst kunye nezinto ezikhuselayo zombane. Ngokukodwa igwebu lobhedu sisiseko esetyenziswa njenge-elektrode yebhetri, kunye nezinto ezithile eziluncedo.
Igwebu lobhedu linokusetyenziswa njenge-substrate ye-electrode
Igwebu lobhedu linomsebenzi omkhulu wokuqhuba ubushushu kunye nombane, onokuthi usetyenziswe njengesiqendwana se-electrode sebhetri ye-lithium okanye iseli yamafutha.
Ubhedu lweCopper lusetyenziswe ngokubanzi njengamalungiselelo ebhetri engaphathanga nto, i-electrode substrate yebhetri ye-lithium ion okanye ipetroli, umthuthi weselfowuni kunye nezinto ezikhuselayo zombane. Ngokukodwa igwebu lobhedu sisiseko esetyenziswa njenge-elektrode yebhetri, kunye nezinto ezithile eziluncedo.
1) amagwebu obhedu aneempawu ezigqwesileyo ze-thermal, inokusetyenziswa ngokubanzi kwiimoto / zombane nakwizinto ze-elektroniki zemitha yokuhambisa ubushushu.
2) igwebu lobhedu ngenxa yokuqhutywa kombane ngokugqwesileyo, ibhetri yayo ye-nickel-zinc kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ze-elektrode zombane wesingqimba sombane esichaphazeleka kukuchaphazeleka ngumzi mveliso.
I-3) ngenxa yeempawu zobhedu lobhedu kwaye ayinabungozi kwiimpawu zomzimba womntu, izinto zokuhluza ubhedu lobhedu liyeza elifanelekileyo kunye nezinto zokucoca amanzi.
Iphepha le-foam yethusi
5PPI ukuya kwi-80PPI
0.25g / m3 ukuya ku-1.00g / cm3
Iipesenti ezingama-90 ukuya kuma-98%
5mm ukuya 30mm
1. Icandelo lobunjineli beKhemikhali
2. Ubunjineli boMbane obuSebenzayo: izixhobo zokuthambisa, izixhobo ezisebenza ngokufudumeleyo ezisebenza kakuhle, izixhobo zokucoca imveliso, izinto zokuhombisa ezikumgangatho ophezulu.
3.Izixhobo ezisebenzayo: Silencer, Vibration absorption, Buffer electromagnetic shielding, stealth technology, flame retardant, thermal insulation, njl.
4. Izinto zeBhetri ye-Electrode: Isetyenziselwa izinto zesakhelo sebhetri ye-electrode enje nge-nickel-zinc, ibhetri ye-nickel-hydrogen kunye ne-capacitor yombane ophindwe kabini ngombane.
5. Elula: Izithuthi ezilula, ubunzima bokukhanyisa iinqanawa, kunye nezakhiwo ezikhaphukhaphu.
6. Ukugcina izixhobo: Uxinzelelo lokunciphisa isixhobo sovavanyo lwegeji.
Egqithileyo Umzimveliso Foam
Okulandelayo: Alumina yodongwe amagwebu lokucoca ulwelo
Ibhetri yeCopper Foam
Amnyama amagwebu eCopper
Iphepha elinobhedu lobhedu
AbaXhasi beGwebu beCopper
ICopper Metal Foam
Ukuhamba kwegwebu lobhedu